धमला पत्नी समुन्द्रको प्रेममा चुर्लुम्म डुबिन् ! « Ramailo छ
धमला पत्नी समुन्द्रको प्रेममा चुर्लुम्म डुबिन् !
सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतमको डेव्यु फिल्म ‘अनुराग’ को पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा एलिजा नव नायक समुन्द्र पण्डितसँग रोमान्टिक मुडमा देखिएकी छिन् । सत्यराज चौंलागाईंको निर्देशन रहेको ‘अनुराग’मा एलिजा र समुन्द्र प्रेम जोडीको रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
धमला पत्नी आफ्नै लगानी रहेको ‘अनुराग’ को प्रदर्शन मिति भने असोज १२ गतेलाई तय गरिएको छ। यसअघि फिल्मलाई साउनमै सार्वजनिक गर्ने योजना थियो । तर पोस्टरसँगै नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको हो । फिल्मको दुई गीत ‘कान्छा दाई’ र ‘यस्तो साथी’ सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
म्युजिकल लभ स्टोरी फिल्म ‘अनुराग’ मा एलिजा र समुन्द्रसँगै ठिलेंन लामा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल, शिशिर राना, मोहन निरौला, विश्व बस्नेत लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । पटकथा तथा संवाद निर्देशक चौलागाईं र आगत केसीले तयार गरेका हुन् ।
‘अनुराग’ का प्रस्तुतकर्ता ऋषि धमला हुन् । भरत गौतम र गीता भेटवाल निर्माता रहेको ‘अनुराग’ को कथा किरण दाहालले लेखेका हुन् भने रामकुमार केसी छायाँकार हुन् । धमला पत्नीको फिल्म अनुराग घोषणासँगै विभिन्न कारणले चर्चामा छ ।